Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley oo la taahaya sirtuu ka hayo Guuleed Casoowe
Cabdi iley oo la taahaya sirtuu ka hayo Guuleed Casoowe
Cabdi iley wax kasta halagu sheego laakiin nin uu si sahlan Guuleed Casoowe uga baxsan karo dabinadiisa laguma wado. Waxay dad badan aad ula yaabeen markuu Cabdi iley iska fogeeyay ka dibna uu xabsiga dhigay Guuleed Casoowe oo ahaa ninkii ka soo saaray booskii uu ku soo caan baxay ee ahaa qaraaca iyo dilka islaamaha oo keenay saaxada siyaasadda. Waxyaaba badan oo qarsoon ayaa jira, hasa ahaatee waxaa hubaal ah in mudadii uu la socday Casoowe oo aad u yaqaano Cadi iley uu waxyaaba badan ka ogyahay isla marahaantaana uu malafyo badan meel sii dhigtay maadaama uu ka filayay inuu marun qalaci doono. Sidaa darteed, wuxuu sii urursaday Guuleed Casoowe kayd uu isku badbaadiyo oo markii ay timaado in naftiisa lagu gorgortamo uu miiska soo saaro. Hasa ahaatee waxay dad badan is-weydiinayaan Cabdi iley oo shakigii uu ka qabay Casoowe ay hadda u cadaatay muxuu samayn doonaa.
Shabakadda OgadenToday waxay qortay in wariyaheeda oo booqday xabsiga ay qaar kamid ah maxaabiista iyo booliska ilaaliya xabsigu u sheegeen in uu Guuleed soo jeediyay qorshe gorgortan ah kaas oo uu ku dalbanayo in lasii daayo isagoo taa badalkeediina sheegay inuu xafidayo siro badan oo uu ka hayo madaxda ugu saraysa kililka.
Wuxuu sheegay sida ay qortey OT inuu hay ohayo Guuleed casoowe muuqaalo muujinaya xumaan ay wada samaynayaan qurbajoogtii Ogaadeenya tagtay iyo wasiiro iyo masuuliyiin ka mid ah kililka. Waana hubaal arintaa.
Waxaa kaloo uu sheegtay Guuleed inuu hayo xogo badan oo isugu jira cadaymo maqal iyo muuqaal ah oo ku saabsan dil uu Cabdi Ilay sameeyay iyo video ay iska duubeen madaxda ugu saraysa kililka oo samaynaya falal anshax xumo ah oo ay la samaynayaan dumar Soomaali iyo xabashi ah.
Ma’aha markii ugu horeysay ee Cabdi iley ay soo wajahaan arimahanoo kale. Marka bustooladanoo kale madaxa laga saaro, Cabdi iley wuxuu soo ururiyaa ehelada shaqsigaa gaar ahaan kuwa ugu jilicsan sida waalidiinta, xaasaska iyo qaraabada dhow. Qaar badan ayuu sidaa ku aamusiiyey, hasa ahaatee arintan ka soo yeedhay Guuleed Casoowe waxay naxdin badan ku beertay sida ay sheegtay OT masuuliyiin badan oo kililka ah oo hadda wadnaha farta ku haya kana baqaya inuu sheego ama soo saaro waxyaabo ay isla ogaayeen, iyadoo la sheegayo in aragtida wasiirada kililku ay u badan tahay in lasii daayo marka laga reebo Cabdi iley oo la sheegayo inuu ka hayo sir dambi wayn ku noqon karta.
xumaantoodu way soo bixi doontaa, casoowe ha qariyo ama ha baahiyo.
ilaahay waxba kama qarsoono qofkasta oo danbigalana wuu kashifayaa waxaana rajaynayaa in ay soobixidoonaan waxbadan oo qorsoonaa mahadaasna waxaa iskaleh ilaahay. ialaahayna wuu noo aqbalayaa ducadayna, qofkasta oo umada danbi kagalana ilaahay ha fashiliyo.
camaasiirtana ilaahay umada hakasooqabto.
Nimaan Ciilay baa i Caayay bay tidhi Dacawo! Haddii ay tahay in wax la iska celiyo Si Caqliya wax haloo Qoro. waan ognahay Abdi ileey iyo Casoowe cid si gaara waraysi uga soo Qaadayna ma jiro Ninkaas Maxbuuska ah haddii uu Wax Shegina Waa hore ayay ahayd inuu wax sheegaa waxayse ila tahay Damiirkaas meesah kumaba jiro iyo waxaad Soo Qorteen ee Mala-awaalka ah.
ALLAHU AKBAR. WAXAA LAYIRI LABADII XUMAAN KUHISHIISO HEE II DHAMAYSTIRA SOMALIYEY. WAXAANU LEENAHAY ILAHAY HAA NAGA QABTO DADKAN SEEFAHA LABADA AF LEH. DADKOODII BAY KADHIGTEEN SUUQA XOOLAHA OO LABEEC GEEYO. KHAMRIGA, SINADA, DILKA WAX AYNA FALAYN DADKAN MAJIRO ILAAHAY KACABSI BAAN JIRIN. WAX OO WANAAG AHNA IN AY SOOWADIN RUUXKASTA OO WAX GARAD AH WUU OGYAHAY.